Waxa lagu arko Montevideo | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Montevideo, Maxaa la arkaa
Koonfurta Ameerika, godka Río de la Plata, waxaa ku yaalo dal yar oo la yiraahdo Uruguay. Caasimadiisu waa magaalada Montevideo maantana waxaynu soo qaadaneynaa taariikhdeeda iyo waxa ay yihiin meelaha loo dalxiis tago.
Marka aad ugu dhowdahay Buenos Aires, caasimada Arjantiin, safarrayaal badan ayaa badiyaa soo tamashleeya, "ka gudbaya balliga", sida ay halkan ugu dhahaan Río de la Plata, oo ah mid ka mid ah wabiyada ugu ballaaran adduunka, si ay u neefsadaan hawo deggan, caadiga ah ee magaalo yar.
2 Waxa lagu booqdo Montevideo
Caasimada Uruguay waxaa loogu magac daray buurta ku xigta gacanka waxaana jira dhowr nooc oo ka hadlaya asalka magaca. Dhammaantood waxay isku xiraan falka si ay ula arkaan erayga buur. Taariikhda ayaa taas noo sheegaysa qeybtii hore ee qarnigii XNUMX-aad ayaa deganayaashii ugu horreeyay yimaadeen magaaladuna waxay bilaabatay in la aasaaso. Dhamaadkii qarnigii hore, Burtuqiiska wuxuu horey u aasaasey, meel aan ka fogeyn, meelo badan oo ka baxsan xeebta Buenos Aires, oo ah magaalo qurux badan oo la yiraahdo Colonia de Sacramento.
Markaa 1723 kii Boortaqiiskii wuxuu aasaasay Montevideo laakiin sannad ka dib Isbaanishku way ka saareen. Waxay ka soo gudbeen Río de la Plata oo ka timid Buenos Aires iyaga iyo qaar ka mid ah qoysaska hormoodka ah, qaar waxay ka yimaadeen magaaladan, qaar kalena waxay ka yimaadeen Jasiiradaha Canary, oo lagu daray Guarani Hindi iyo madow ka yimid Afrika.
Taariikhda Montevideo iyo tan Uruguay guud ahaan waxay xiriir dhow la leeyihiin taariikhda Buenos Aires iyo Argentina, laakiin u dhawaanshaha gumeysigii Burtuqiiska ee Brazil sidoo kale saameyn ayey ku yeesheen. Goor dambe, tolnimada iyo maaraynta England oo aan doonaynin marinka Río de la Plata ee gacanta hal gobol, iyadoo gacan ka helaysa bourgeoisie sare ee Buenos Aires, federaal aad u yar Uruguay waxay xornimadeeda qaadatay 1828.
Kadib bilowgii qarnigii XNUMXaad isla markaana gacanta ku haya isla nidaamka socdaalka ee deriskiisa Argentina, dad badan oo reer yurub ah ayaa bilaabay inay yimaadaan, gaar ahaan Talyaaniga iyo Isbaanishka. Tobannaankii sano ee ugu horreeyay qarnigii XNUMX-aad, xaafadaha Montevideo iyo horumarka magaalooyinka waxay bilaabeen inay qaab yeeshaan.
Waxa lagu booqdo Montevideo
Montevideo waa magaalo duug ah marka booqashooyinka waxay ka bilowdaan koofiyad taariikhi ah. Markii hore waxay lahayd darbiyo dhagax ah iyo qalcad. Waxa kaliya ee haray waa albaabka, inta udhaxeysa Peatonal Sarandí iyo Plaza Independencia. Xarunta taariikhiga ah gudaheeda waxaad ka heli doontaa dhismooyinka ugu da'da weyn, matxafyada, makhaayadaha qurxoon, makhaayadaha iyo meheradaha laga dukaameysto.
La Sarandí Lugeeyuhu waa marin u helida Magaalada Old, oo isku xireysa laba qodob oo muhiim ah qeybta hore ee magaalada: dhinac ka mid ah Fagaaraha Xorriyadda dhinaca kalena ah Fagaaraha Weyn, duqa magaalada Plaza. Waa meherad maxalli ah oo midab leh oo ka socota lambarka 250 illaa lambarka 700. Markii dhufaysyadii qarniyadii hore la dumiyey, magaaladii waa la furay sidaasna, Plaza Independencia, wuxuu noqday isku xiraha Old City iyo New City.
Hareerahiisa ayaa ah Salvo Palace, Etévez Palace, Tower Executive, tiyaatarka Solía ​​iyo Puerta de la Ciudadelku. Bartamaha fagaaraha waxaa ku taal taallada loo yaqaan 'José Gervasio Artigas', halyeeyga qaranka, oo ay weheliso qabrigiisa. Waxaa mudan in la muujiyo Tiyaatarka Solís, oo ah dhismo laga soo bilaabo 1856, kaasoo la soo celiyay 2004 wuxuuna leeyahay dukaan iyo makhaayad lagu taliyay.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira safarro hagitaan ah Khamiista, Jimcaha iyo Sabtiyada 11 iyo 12, Waxaad ka sameysan kartaa ballan ka sameynta bogga Montevideo Haddii kale, adigu iskaa, waxaad tagi kartaa Talaadada ilaa Axada 11ka subaxnimo ilaa 18 galabnimo Haddii aad rabto inaad ka sameysid guriga, waxaad isticmaali kartaa Solis App si aad ugu booqato tiyaatarka qaab is bedel ah iyo xaqiiqo la kordhiyay.
Goobaha kale ee dhaqameed ee lagu booqdo Montevideo waa Booska Farshaxanka casriga ah, Matxafka Andes 1972, ka Booska Dhaqanka Cagtiisa Darbiga, Matxafka Guriga Dowladda, Matxafka Guriga ee Vilamajó, Matxafka Farshaxanka-Columbian-ka iyo Farshaxanka Asaliga ah, Matxafka Farshaxanka Qurxinta, Matxafka Farshaxanka Farshaxanka, Matxafka Taariikhda Fanka, Matxafka Xusuusta, Matxafka Hijrada ama Matxafkii Hore ee Kastamka.
Hadaad jeceshahay meherijaan Montevideo waxay leedahay dhaqan aad u fiican waxaadna ku baran kartaa barta Matxafka Carnival. Reer Uruguay sidoo kale waxay jecel yihiin kubada cagta, markaa waad booqan kartaa Matxafka Kubadda Cagtabaaquli ama Matxafka Peñarol, iyo in la barto dhaqanka gaucho waxaa jira Matxafka Gaucho. Waxa kale oo jira guryo faro-ku-tiris ah, oo ka yimid gumeysiga, oo u furan madxaf, sida Casa Garibaldi, Matxafka Jacaylka ama Casa de Rivera.
El Qasriga Salvo Waa dhisme kale oo astaan ​​u ah Montevideo. Taariikhaha laga bilaabo 1928 waxaana dhisay laba walaalo ah oo dhar ah. Waxay leedahay 27 dabaq, dhererkiisuna yahay 105 mitir, sidaa darteed waxay ahaan jirtay taawarka ugu dheer Latin America ilaa 1935.
Montevideo waa magaalo iska indha tiraysa Riiga de la Plata, markaa hadaad tagto xagaaga ama gu'ga, fikrad fiican ayaa laga yaabaa inaad ku dhex socoto xeebaheeda arnasyada cad iyo biyo nadiif ah. Waxaa jira a socod socod oo ku dhowaad 30 kiiloomitir Waxay ku socotaa xeebaha sidaa darteed waa socod weyn. Qodobada ugu muhiimsan ee socodka waa xuska xasuuqii Yuhuudda, Escollera Sarandí, Punta Cárdenas Lighthouse, Montevideo Cartel, Plaza Virguilio iyo Puertito de Buceo.
Si aad ugu raaxaysato wanaag aragti dusha sare ee Montevideo markaa waa inaad buurta aad iyada oo dhererkeedu yahay 135 mitir iyo xagga sare oo ah Qalcaddii Guud ee Artigas, ayaa Muuqaalka dusha sare iyo Tower Isgaarsiinta kana yimid xaafada Aguada.
Habeen baa imanaya, ka waran nolosha habeenkii ee Montevideo? Wixii ugu caansan waxaa jira milongas iyo naadiyo lagu cayaaro tango, muraayad Buenos Aires oo aad u soo jiidan karta dalxiisayaasha.
Xilliga xagaaga waad ku raaxeysan kartaa tiyaatarka xagaaga, cirka furan hoostiisa, iyo haddii aad jeceshahay cuntada waxaa jira kuwa Suuqyada Gastronomic ee Magaalada Hore, oo leh noocyo kala duwan oo dhadhan ah. Waxaa ku yaal Mercado Agrícola de Montevideo, oo leh 100 dukaanno, Naqshadaynta Sinergia, Suuqa Ferrando, Suuqa Siam iyo Suuqa William, si aad u magacawdo wax yar
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka » Montevideo » Maxaa lagu arkaa Montevideo